တစ်ဦးကလိုင်း Flowy Maxi Dress ချွတ် | ဗုဒ္ဓ Trends - Buddhatrends
ယင်း၏ချော့မော့ v neckline, ရှည်လျားသောအင်္ကျီလက်နှင့် flowy အချိုးမညီဒီဇိုင်းနှင့်အတူ, ဒီချောင်စားဆင်ယင် Zen သက်သာခြင်းအမျိုးမျိုးအန္တိမစကားရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အလွယ်တကူသင်အကြိုက်ဆုံးအသုံးအဆောင်များ, လည်ဆွဲ, scarves, အကျီစတာတွေကျစ်လျစ်သေးသွယ်ထဲကနေ 5XL မှ Size ကိုအကွာအဝေးနှင့်အတူတွဲနိုင်ပါသည်။
ဟုတ်ကဲ့: Pocket နှင့်အတူ
N ကို *** င
ငါ 2XL အမိန့်, အလတ်စားအမေရိကန်ကိုအသုံးပြုပါ။ ဒါကြောင့်လက် lenght မှလွဲ. ကိုက်ညီ။ စျေးနှုန်းအဘို့အလွန်ကောင်းသောအရည်အသွေးနှင့်လှပသောစတိုင်၎င်း၏နေဆဲ
ကို C *** y က
B က *** t ကို
ငါသည်ဤအဆိုပါထည်ပင်ပူပြင်းတဲ့ Kansas ပြည်နယ်နေ့၌အလင်းအလေးချိန်, ဒါပေမယ့်ကြံ့ခိုင်, ကောင်းတဲ့နှင့် airy ဖြစ်ပါတယ်dress❣ LOVE! ငါလုံးဝရုံကောင်းစွာဘယ်နေရာမှာမဆိုအဘယ်သူမျှမပြဿနာများနှင့်အတူချုပ်နှင့်မျှအနံ့ရှိ၏ဖြစ်ပါတယ်ရုံအဘယ်အရာကိုငါအဆိုပါစားဆင်ယင်မှုအတွက်မျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်ဖြစ်သည့်စာမျက်နှာရုပ်ပုံတူနေတဲ့အုတ်အနီရောင်အရောင်မျိုးကို, ဒီစားဆင်ယင်၏အရောင်ကိုချစ်။ အရပ်မြင့်သောကျွန်မ (78 ပေါင်တည်းဟူသောနှင့် 175'173 5kg နှင့် 9cm ဖြစ်၏ "ငါသည်ဿုံကိုက်ညီသော XXL အရွယ်အစားကိုရွေးချယ်ပါ, ကျွန်တော်တို့ကိုအမေရိကန်မိန်းကလေးများအဘို့,) ။ ကျွန်မရဲ့ခင်ပွန်းကတစ်ဦးကြီးတွေကိုပေး၏,"2"ထ eyebrows, ချီးမွမ်းခြင်းကိုအမှန်ပင်! အဆိုပါရေကြောင်းရုံရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အချိန်စူပါအစာရှောင်ခဲ့ပါသည်, ထိုစားဆင်ယင်လည်းလမ်းခရီးဘို့ထုပ်ပိုးခဲ့သည်။ ငါပျော်ရွှင်စွာ + ဤရောင်းချသူတစ်ဦးကြီးတွေ5ပေး☆☆☆☆☆ '' s နှင့်အာမခံမယ့် 100% စိတ်ကျေနပ်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်။ ကနေဝယ်ပါ ပြီးပြည့်စုံသောယုံကြည်မှုနှင့်ယုံကြည်မှုနှင့်အတူဤရောင်းချသူ❣ငါသိငါagain⚘ပြန်ဖွစျလိမျ့မညျ
အီး *** z
အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့! အလွန်အလင်းနှင့်ပျော့ပျောင်းသောနွေရာသီအဘို့အပြီးပြည့်စုံသော။ ပုံအဖြစ်အရောင်။
ငါ *** ဎ
H ကို *** y က
ကိုယ့်အခြားအရောင်အတွက်တဦးတည်းရဲ့အရွယ်အစားပိုကြီး ယူ. စုံလင်ခြင်းရှိ၏
L ကို *** င
ငါ "အရပ်ရှည်ရှည်5'' 8 ဖြစ်၏။ အဆိုပါစားဆင်ယင်ပုံထဲမှာရှိသကဲ့သို့အကြှနျုပျအပျေါနေသမျှကာလပတ်လုံးမဟုတျပါဘူး, က Maxi ထက်ပို MIDI ဖြစ်ပါသည်, သို့သော် OK ကိုပါပဲ။
, G *** r
R ကို *** ဃ
စပျစ်သီးကိုအင်ပါယာခါးလောက် Rami Maxi Dress
စပျစ်သီးကိုအင်ပါယာခါးလောက် Rami Maxi Dress ရောင်းကုန်ပြီ
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဇင်အဆမတန်ကြီးမားလဲမှို့ Dress $80.10 $89.00
ပန်း Gradient လဲမှို့များနှင့်ပိတ်ချော Dress
ပန်း Gradient လဲမှို့များနှင့်ပိတ်ချော Dress $87.00
စပျစ်သီးကို V-လည်ပင်းလဲမှို့ပိတ်ချော Maxi Dress
စပျစ်သီးကို V-လည်ပင်းလဲမှို့ပိတ်ချော Maxi Dress $89.00
အင်္ကျီ Dress Up ကိုမြည်းကြိုးကိုဖြည် Button လေး
အင်္ကျီ Dress Up ကိုမြည်းကြိုးကိုဖြည် Button လေး $37.20 $62.00
ဇင်ဥယျာဉ်အင်ပါယာခါးလောက်မီဒီ Dress $67.00
နှလုံးသားလဲမှို့ပိတ်ချောဖြူ Maxi Dress မှာ Hippie
နှလုံးသားလဲမှို့ပိတ်ချောဖြူ Maxi Dress မှာ Hippie $108.00
အဆမတန်ကြီးမားပိတ်ချောမီဒီ Dress $79.00